किन दिए वीरगञ्जका मेयर विजय सरावगीले एक्कासी राजीनामा ?::Pathivara News
किन दिए वीरगञ्जका मेयर विजय सरावगीले एक्कासी राजीनामा ?
२९ भदौ, वीरगञ्ज । महानगरपालिकाको काममा अनावश्यक दबाव दिएको भन्दै वीरगञ्ज मेयर विजय सरावगीले संघीय समाजवादी फोरमबाट राजीनामा दिएका छन् ।
नगर अध्यक्ष ईश्वर यादवले कार्यव्यस्तताको कारण नगर प्रमुखले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्न समय दिन नसकेको बताए । ‘मधेस आन्दोलनको भावना र जन चाहना अनुसार महानगरको विकास हुनुपर्छ भन्ने नगरसमितिको ठहर छ । त्यसैले नगर प्रमुखलाई ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेका थियौं’ यादवले अनलाइनखबरसँग भने ‘नगर प्रमुखले व्यस्तताका कारण समय दिन सक्नुभएन । समय दिएपछि लगेर बुझाउँछौं ।’